कांग्रेसले तोरी फल्छ भनेर कोदो लगाएका थिए जनताले पत्यायनन!!!::Nepal's Online News Portal
कांग्रेसले तोरी फल्छ भनेर कोदो लगाएका थिए जनताले पत्यायनन!!!
शनि, मंसिर २३, २०७४
पछिल्ला राजनीति घटनाक्रम हेर्दा र चुनाबी माहोल हेर्दा जनता ले केहि बुझे जस्तो लाग्यो। मै हु र मै ठुलो भन्ने पार्टी र नेता लाई यसरी बढारे लाज सम्म पनी जोगाईदिने बाटो राखेनन। जनतामा यसरी परिबर्तन आउनु नेपाल को लागि पक्कै पनी राम्रो कुरा हो। सधै उही चलन उही पारा लाई डाँडा कटाउने गरि एक मेन्डेट दिएका जनताले। अब आशाबादी हुने बेला आएको छ। बाम गठबन्दन ले जसरी जनता को मन जीते जसरी जनता लाई बिस्वास दिएका छन सरकार निर्माण पश्चात आफ्ना एजेण्डा मा भरपूर लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस जो जनता लाई बीपी को सिध्दान्त बेचेर भेड़ा बनाएको थियो अब जनता ले बुझे। कांग्रेस लाई सुध्रने मौका दिएका छन बिचार परिवर्तन गर शैली परिवर्तन गर देश लाई विदेशी को गुलाम नबनाउ। अब को पाँच बर्ष २००३ साल देखी अहिले सम्म जनता लाई भ्रमित गरि राज्य दोहन गरेको अपराध को याचना माग। हाम्रै कारण कम्युनिस्ट जन्मियो दस बर्षे युध्द भए जनता हताहति मा हाम्रै सरकार पनी लगेको भन्ने स्वीकार गर। आफ्नो संगठन बनाऊ अरुको नीतिको बिरोध र भ्रम नफैलाउ। कम्युनिजम को अपब्याख्या गराएर जनता भडकाउने र कम्युनिस्ट सिध्दान्त का दल लाई फुटाएर आफु ठुलो पार्टी र सर्बसत्ता धारी बन्ने तरीका बिल्कुल त्याग। धमकी दम्भ को राजनीति सुधार जनमुखी योजना ल्याउ बाम गठबन्दन मा सहकार्य गर जनता को लागि आवाज उठाऊ। इतिहास बोकेर मात्र राजनीति हुदैन जनता लाई भरोशा पनी दिलाउनु पर्छ र जनमुखी काम पनी गर्न सिक्नु पर्छ। राजनीति एक प्रयोग हो प्रचण्ड त्यसका डिजाइनर हुन केपी ओली ब्यबस्थापक हुन। कांग्रेसमा खाली अहंकार हाबी शेखर कोइराला को भाषण मा लालबाबू पण्डित चिन्दिन भन्नु कति सम्म घमण्ड अब जीबन का अन्तिम यात्रा सम्म लालबाबु के हो र को हो राम्रो सग याद रहने छ। भूकम्प पीड़ित लाई आएको जस्तापाता काण्ड मा र संसार के उत्कृष्ट अर्थ मन्त्री भनी आफुघोसित रामशरण महत अब फेरि अर्थ मन्त्री बन्ने बाटो नै रोकिदिए जनता ले किन? समीक्षा गर्नुस कति आक्रान्त रैछन जनता कति पिलसिएका रैछन। ब्यबहार मा जे जस्तो भए पनी जनता को अगाडि स्पस्ट हुने गर्नुस गगन थापा जस्तो। गगन थापा एक्लो भएर बादल मा हराएको काग जस्तो भएका छन। उनका योजना आफ्नै पार्टी कांग्रेस ले बूझदैनं। तल्लो स्तर का कांग्रेस समर्थक फेरि आफै प्रधान मन्त्री र पार्टी अध्यक्ष जस्तो गर्छन मै ठुलो मेरा कुरा राम्रा हामी धेरै हामी ईमानदार जस्तो। जन समन्ध के हो आफ्नो धरातल केहो आफ्नो भिजन केहो हैसियत र उचाई बुझनु छैन किताब पढेर सगरमाथा चढने गफ दिन्छन काम को नाम मा योजना तर्जुमा केहो थाहा छैन बिकास को धाक। नेता सग टासिएर फोटो खिचेर फेसबुक मा राखेर एकै थाल मा खाने जस्तो गफ।अब कुरा होइन काम गर हैन भने सन्यास लिएर जागिर खाउ के राजनीति गर्नु। अग्रज बाट सिक राजनीति केहो दुइचार हुल मान्छे बटुलेर उफरदैमा नेता हुने भए दुनिया खाड़ी पसने थिएनन। फ़रक मत कसरि समेटनु पर्छ भन्ने बिचार नभएका झोले कार्यकर्ता बाट नै हो पार्टी सिद्दिएको। चिढाउने पछारने लोभी पापी शैतानी दिमाख भएका फटाहा हरु ले संगठन मझबूत होइन ध्वस्त परेका हुन। कांग्रेस हरु दंग छन। बारी मा कोदो छरेर जनता लाई तोरी फलछ भंथे जनता ले पत्यायनं।
देश बाममय भएको अबस्था छ अब काम गरने शैली परिवर्तन होस भन्ने म जस्तो एक सानो समर्थक को आह्वान हो। जनता जागेको बेला काम गरेर देखाउ नत्र अर्को चुनाब मा काशी पुर्याउछन जनताले। भागभण्डा मा लफड़ा देखाएर हारने हरु हसाउने काम नगर्नुस। भ्रस्टाचार गर्ने को नालिबेली निकालेर खुला मंच बाट सारा नेपाली लाई सुनाउने ब्यबस्थापन मिलाउनुस। छानी छानी भ्रस्टाचारी लाई जेल पठाउनुस। कला धन बिगो अशुलि गरि राष्ट्रीयकरण गर्नुस। पूर्ब विशिस्ट भनी राजकोष बाट दिएको धन रोक्नुस र त्यो धनराशि कर्णाली मा सिटामोल र नून मा लगानी गर्नुस कालीकोट हुमला जुम्ला मुगु मा रहेका जनता लाई बिकास दिनुस। अमेरिका को पूर्ब हरु आफ्नोदेश मा जागिर खाएर जीबन गुजरा गर्ने के नेपाल का सकदैनं र? हेरनुस जनमुखी काम भनेको उत्तर कोरिया को जस्तो मिसाइल बनाउनुस भन्ने होइन। कांग्रेस राज्यरोहण मा जनता गास बॉस कपास बाट नै लुटिएका छन। तपाई चंद्रमा मा रेकेट पठाउने संकल्प नगर्नुस नेपाली का चुला मा सहुल्यत ग्यास र पानी पुर्याउने एजेण्डा बनाउनुस। देश रोएको छ धेरै ठुला योजना होइन हेरेक टोल मा जनजिबिका सहज बनाउने माध्यम बननुस। राष्ट्र निर्माण को जग नै नलाएको अबस्था छ सुरुवात गर्नुस यही बाट देश पाँच बर्ष मा कुन उचाईमा पुग्छ। परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भरता को जग लगाउनुस शूभकामना सम्पूर्ण बाम विजेता तथा लोकतांत्रिक विजेता मा।